संसारकै शक्तिशाली अमेरिकी राष्ट्रपतिको कति हुन्छ तलब र सुविधा ? थाहा पाउनुहोस् – Khabar Silo
संसारकै शक्तिशाली अमेरिकी राष्ट्रपतिको कति हुन्छ तलब र सुविधा ? थाहा पाउनुहोस्
Posted on March 6, 2021 March 6, 2021 Author khabar silo Comment(0)
अमेरिकाको राष्ट्रपतिको पद विश्वकै सर्वोच्च पद मानिन्छ । यो पद हासिल गर्ने व्यक्तिले अमेरि’काको संवि’धानमा उल्लेख भए ब’मोजिम विभिन्न सुविधा प्राप्त गर्छन् ।अमेरिकी कानु’नमा उल्लेख भए अनुसार अमेरि’की राष्ट्रपतिकोे वार्षिक तलव चार लाख डलर हुन्छ । त्यसका साथै एउटा आवास, २४ सै घण्टा स्टा’फको व्यवस्था, व्य’क्तिगत प्लेन तथा हेलि’कप्टरको सुविधा प्राप्त हुन्छ भने सवारी’का लागि विश्वकै सबैभन्दा सुरक्षित ‘लिमोजिन’ कारको व्यवस्था हुन्छ।
यसबाहेक, राष्ट्रपति’लाई विभिन्न १७ वटा शीर्ष’कमा भत्ता प्राप्त हुन्छ । जसमा खाना, खाजास’हितको पचास हजार डलर बराबरको वार्षिक व्यय भत्ता, एक लाख डलर बराबरको कररहित ट्राभ’ल भत्ता, १९ हजार डल’रको मनोर’ञ्जन भत्ता सामेल हुन्छ ।अमेरिकी राष्ट्रपति’लाई ह्वाइट हाउ’समा आवासको समेत व्यव’स्था हुन्छ ।
जम्मा छ तल्ले ह्वाईट हाउसमा एक सय ५ वटा कोठा छन् । जहाँ एक टेनिस कोर्ट, एक बांलिङ्ग एली, एक पारि’वारिक मुभी थिएटर, जगिङ्ग ट्रयाक, स्वीमिङ्ग पुल लगायतका सुविधा रहेको छ । घरको मर्मतसंहारका लागि वार्षिक एक लाख अमे:रिकी डलर भत्ता प्राप्त हुन्छ । त्यस्तै, राष्ट्रपतिको अतिथि’का लागि व्लेयर हा’उसको समेत व्यवस्था हुन्छ ।
अमेरिकी राष्ट्रप’तिलाई सेक्युरि’टीको व्यवस्था, निशुल्क स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्स्योरेन्सको समेत व्यवस्था हुन्छ । साथै, राष्ट्रपति तथा उनको परिवारलाई २४ अ‍ैं घण्टा कडा सुरक्षा प्रदान गरिएको हुन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई छुट्टी भने हुँदैन । यसको सट्टा उनी’हरुलाई दृश्या’वलोकन गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ ।
सेवानिवृत भएप’छि अमेरिकी राष्ट्रप:तिलाई व’र्षैभरी पेन्सनको समेत व्यवस्था हुन्छ । सेवा निवृत भएपछि अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई वार्षिक दुई लाख अमेरि’की डलर प्राप्त हुनुका साथै स्टाफ’सहित एउटा अफिसको व्यवस्था हुन्छ । यसबाहेक, पूर्व राष्ट्रपतिको विध’वालाई वार्षिक एक लाख अमेरिकी डलर भत्ता प्राप्त हुन्छ । – एजेन्सी
भारत–चीन सीमामा भिडन्त हुँदा किन गर्न मिल्दैन गोलीबारी ?
Posted on June 17, 2020 June 17, 2020 Author khabar silo
भारत र चीनबीच लद्दाखमा जारी विवाद सोमबार राती हिंस्रक झडपमा परिवर्तन भयो । यो झडपमा हालसम्म २० जनाको मृत्यु भएको बीबीसीले पुष्टि गरेको छ । यहि विवादबीच चीन र भारतबीचको झडपमा गोलीबारी किन हुँदैन भन्नेबारे जानकारी लिऔं । यो एक सम्झौताका कारण हो जुन सन् १९९३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पीवी नरसिम्हा रावले चीनको यात्राका बेला […]
भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या ७ लाख ४२ हजार नाघ्यो
एजेन्सी । भारतमा मङ्गलबार कोभिड–१९ का २२ हजार ७५२ नयाँ बिरामी थपिएपछि संक्रमितको करिब सात लाख ४२ हजार नाघेको छ । भारत हालसम्म कूल सक्रमितको संख्या ७ लाख ४२ हजार ४१७ जना पुगेको केन्द्रिय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले बुधबार जानकारी दिएको छ । भारतमा मङ्गलबार थप २२ हजार ७५२ व्यक्तिमा संक्रमण पुष्टि भएको र […]
अस्ट्रेलियाको अर्थतन्त्र तहसनहस पार्दै चीन, अरबौं डलरको गहुँ खरिदमा लगायो प्रतिबन्ध
Posted on November 5, 2020 Author khabar silo
बेइजिङ । चीनले अस्ट्रेलियामा उत्पादित गहुँ खरिदमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ । पछिल्लो समय दुई देशबीच तनाव बढ्दै गएको छ ।हङकङबाट प्रकाशन हुने साउथ चाइना मर्निङ पोस्टमा छापिएको समाचारअनुसार आगामी शुक्रबारदेखि नै चीनले अस्ट्रेलियाबाट जौ, चिनी, रातो अंगुर, काठ, कोइलालगायत वस्तु आयात गर्न प्रतिबन्ध लगाएको हो । गहुँ आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धको मितिबारे भने उल्लेख गरिएको छैन । चीनले […]
अष्ट्रेलियाको स्किल्ड रिजनल भिसा कस्तो व्यक्तिले प्राप्त गर्न सक्छ ?
कुनै बेला लाल जोडि भनेर चिनिने शाहिद कपुर र करिना कपुर अहिले छन् एक अर्को सँग टाढा